Soomaaliya Oo Dadkeeda U Adeegsanay Tallaalka Ay Koonfur Afrika Joojisay - #1Araweelo News Network | #1Araweelo News Network
#Soomaaliya Oo Dadkeeda U Adeegsanay Tallaalka Ay Koonfur Afrika Joojisay
Muqdisho(ANN)-Dawladda Soomaaliya ee xilligeedu dhammaaday, ayaa shaacisay in ay dalka ku baahinayso Tallaalka la doonayo in uu difaac u noqdo xannuunka COVID-19, ee aduunka sida weyn ugu baahay.
Sidaana waxa lagu sheegay War-saxaafadeed kasoo baxay Wasaaradda Caafimaadka Soomaaliya maanta, waxaana lagu soo bandhigay dadka ugu horeeya ee tallaalka qaadan doona iyo sida loo qaadan doono,
Nooca Tallaalka ee Soomaaliya la keenayo aylaa lagu sheegay inuu yahay AstraZeneca/Oxford vaccine, iyadoo qiyaasta wajiga hore la heli doono ay tahay, 1,224,000.
Nooca tallaalka ee Wasaaradda Caafomaadka Soomaaliya sheegtay in ay dalka ka bilaabay ayaa ah mid ay dawladda Koonfur Afrika oo ka mid ah dalalka uu xannuunku ku habsaday ee ugu daran qaarada Madaw ee Afrika ay dalkeeda ka joojisay, iyagoo ku sababeeyay in Tallaalka .straZeneca/Oxford vaccine, noqday mid aan waxba ka tarayn difaaca xannuunka. sida lagu sheegay war ay maanta shaacisay xukuumadda Koonfur Afrika.
Salim Abdool Karim oo ah khabiir ku takhasusay xannnuunada faafa, isla markaana ah guddoomiyaha guddida latalinta wasiirada South Africa ee COVID-19, ayaa ka sheegay shir jaraa’id Axadii in soo saarida tallaalka ee South Africa “loo baahan yahay in si kumeel gaadh ah loo hakiyo”, wuxuuna natiijooyinka niyadjabka leh. .Salim Karim wuxuu u sharraxay Sayniska in tallaalka ay tahay in laga helo Koonfur Afrika qiyaastii, isla waqtigaa, sidaa darteed waa in aannay dib u dhac ku imaan bilawga ilaalinta shaqaalaha daryeelka caafimaadka. ayuu yidhi.
Hase yeeshee dawladda Soomaaliya oo iyadu nooca Tallaalka ay koonfur Afrika joojisay u adeegsanay dadkeeda, ayaa sheegtay in ay u samaysay qorshe ay ku hirgelin Tallaalka, waxayna u dejisay qorshahan sida ay ku sheegtay qoraalka maanta kasoo baxay wasaaradda.
Somaaliya illaa iyo hadda waxay xaqjiisay helidda tallaal ku filan 20% dhamaan Bulshada, taasoo dabooli doonta inta badan dadka nugul ee aan kor kusoo sheegnay. Dowladdu waxey ku dadalaysaa sidii dhaqaale kale loogu heli lahaay in dhamaan bulshada hesho Tallaalka.